Thai Nepal News:: मेडिकल कलेजका सञ्चालक को कस्ता ?
काठमाडौँ: पछिल्लो समय नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ। अझ राजनीतिक दलका नेताको आशिर्वाद र संरक्षण पाएर मेडिकल कलेजमा लगानी गर्नेको त लाइन नै लागेको छ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. चन्दा कार्की र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा अध्यक्ष गोपाल पोखरेल नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध छन्। किष्ट मेडिकल कलेज काठमाडौंका प्रिन्सिपल बलमानसिंह भने राजावादी कांग्रेसका रुपमा चिनिन्छन्। उता मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा भने भारतीय लगानीको कलेज हुन्।
पोखराबाट केशवशरण लामिछाने, चितवनबाट अनिल ढकाल र बुटवलबाट लक्ष्मण पोखरेलको सहयोगमा